Annaga |Waa maxay faa'iidada saamileyda ah ee Jiangxi Rayone Wheels Technology Company Limited?
RAYONE WHEELS, oo la aasaasay bishii Maajo 2012, waa shirkad tignoolajiyadeed casri ah oo casri ah oo ku takhasustay naqshadaynta, wax soo saarka, iyo iibinta taayirrada daawaha aluminium ee baabuurta.Warshada RAYONE waxa ay dabooshaa aag ka badan 200,000 mitir oo laba jibbaaran, oo leh qalab dhamaystiran oo wax soo saarka taayirrada aluminium iyo horumarsan.
Marka la eego Miisaanka, awoodda wax-soo-saarka hadda waa 1 milyan oo taayir baabuur ah.
Marka la eego tignoolajiyada wax-soo-saarka, RAYONE waxay leedahay khad-soo-saarka habka wax-soo-saarka cuf-jiidadka, khadka-soo-saarka cadaadiska-hooseeya iyo khadka-soo-saarka habka-soo-saarka, kaasoo dabooli kara baahiyaha kala duwan ee macaamiisha kala duwan ee adduunka oo dhan.
Marka la eego hubinta tayada, RAYONE waxay dhaaftay IATF16949, qeexida nidaamka tayada baabuurta caalamiga ah.RAYONE waxay soo xigatay heerka farsamada ee xarunta taayirrada iftiinka iftiinka ee baabuurta ee Japan si loo hubiyo badbaadada iyo alaabada tayada sare leh ee la isku halayn karo.Dhanka kale, RAYONE waxay leedahay shaybaar waxqabad oo hub ah oo auto ah oo leh awood tijaabo madax banaan, kaas oo lagu aasaasay si adag si waafaqsan heerarka shaybaadhka VIA ee ururka baadhista baabuurta Japan.
Marka la eego hal-abuurka tignoolajiyada, RAYONE waxay fiiro gaar ah u leedahay ilaalinta deegaanka iyo hal-abuurka tignoolajiyada, waxay leedahay koox farsamo oo xirfad leh si ay si joogto ah u soo bandhigto una nuugaan tignoolajiyada horumarsan ee Yurub, Ameerika, Japan iyo dalal kale, iyo RAYONE waxay helaysaa faa'iidooyinka dhiggooda gudaha iyo dibedda. lagu dhex daray fikrado naqshadeed heer sare ah oo ku jihaysan bini'aadamka iyo tignoolajiyada heersare ah, oo si joogto ah loo cusboonaysiiyay si loo hagaajiyo adkaanta xuddunta, la dhimo miisaanka xuddunta, wanaajiso waxqabadka xuddunta ee dhammaan dhinacyada, una hoggaansanto shuruudaha badbaadinta tamarta warshadaha baabuurta caalamiga ah ee isbeddelka horumarka.
Marka la eego horumarinta suuqa, RAYONE waxay isku xidhaa khadka tooska ah iyo khadka tooska ah si ay u dhammaystirto qaabaynta suuqa caalamiga ah ee alaabada iyo adeegyada tayada sare leh.Iyada oo leh tayada badeecada oo aad u fiican, sumcad wanaagsan iyo adeeg wax soo saar oo tayo sare leh, RAYONE ayaa ugu dambeyntii ku guuleysatay ammaan ballaaran suuqa.
Marka la eego kooxda kartida, RAYONE waxay ku fiican tahay helitaanka hibada, ka faa'iidaysiga kartida kartida, kobcinta tayada joogtada ah, firfircoonida dhiirigelinta gudaha ee hiboyinka, iyo gaadhista hibooyinka.RAYONE waxay leedahay fikrad naqshadeed oo horumarsan, awood wax soo saar oo xoog leh, qaabka suuq-geynta oo si ballaaran loo aqbalay ee xoogga sare, urursaday khibrad hodan ah oo wax ku ool ah, oo u yaqaan nidaamka maaraynta si loo buuxiyo shuruudaha horumarinta waqtiyada, oo leh nashqad xooggan iyo awoodaha R & D.
Meesha baabuur yaalo mee Rayone
Had iyo jeer waxaan nahay Online
Si loo abuuro qiimo macaamiisha
Si aad u hogaamiso moodada iyo in la hubiyo badbaadada safarka aadanaha
Si aad u noqoto astaanta taayirrada adduunka oo si weyn loo ixtiraamo warshadaha giraangiraha
Inaad danta dadka kale ka horraysiiso, Si aad wax walba ugu qabato, In aynu midowno, in aynu si dadaal leh u shaqayno maalin kasta, in aynu samayno wax cusub mar kasta, in aynu noqonno kuwo adag, aynu la tartanno nafteena si aynu u sii wanaajino oo u wanagsanno.
Dadka oo dhami jacaylkooda iyo hilowga ay u qabaan nolol wanaagsan weligeed ismay beddelin.Nolol wanaagsan, dhadhan fiican!
Kooxda RAYONE waxaa ka go'an inay u soo bandhigaan quruxda kumanaan qoys, isku dhafka casriga ah iyo kuwa moodada leh ee leh dareenka sayniska iyo tignoolajiyada ee taayirrada baabuurka, iyo u rogida taayirrada farshaxannada ordaya.
RAYONE waxay si joogta ah u raacdaa shuruudaha iyo xakamaynta faahfaahinta, waligaa ha ilaawin ujeedada asalka ah ee dulqaadka, oo ilaali quruxda ugu daacadsan.
Xariifnimada iyo ilaalinta quruxda.
Haybad kastaa waxay u baahan tahay adkaysi.Mid kastaa waa inuu maskaxda ku hayaa riyadii asalka ahayd.Dhanka riyadan, waxaan sii wadi doonaa inaan u adkaysanno oo aan ku dadaalno inaan gaarno baddeenna buluugga ah iyo cirka buluugga ah.RAYONE waligaa garabkiina ayuu ahaan doonaa.